FATY TEO AN-TOKOTANIM-PIANGONANA
Razana ana raim-pianakaviana efa simba sy lanin’ny biby ny masony an-kavia sy ny tongony roa no hita teo an-tokotanin’ny fiangonana iray tao Miaramandroso, Tsinjoarivo, distrika Fenoarivobe.
Tamin’ny 10 ora atoandron’ny alahady 26 mey teo no nisy nampandre ny zandary tao Tsinjoarivo ka nandeha nizaha ny razana niaraka tamin’ny dokotera lehiben’ny CSB2 tany an-toerana. Lasa namangy ny havany ny vadiny aman-janany. Voalaza fa efa nisy namono vao nisy nanary teo an-tokotanim-piangonana.
SAVIKA NAHAFATY OLONA
Araka ny fampitam-baovaon’ny zandarin’ny faritra Itasy, efa tratra avokoa ireo enin-dahy nahafaty tovolahy iray avy namonjy “savika”. Taorian’io lanonana nentindrazana io izay notanterahina ny 25 mey teo, tovolahy iray hihazo ny trano fonenany no nisy nidaroka teo Marohery, Maropapelika, Manazary, ny 25 mey tamin’ny 9 ora alina. Naratra mafy izy io ary nentina namonjy mpitsabo teo an-toerana saingy tsy tana ny ainy noho ny ratra nahazo azy.
FISOROHAN’NY CUA HAIN-TRANO
Manentana ny mponin’Antananarivo Renivohitra ny tompon’andraikitry ny kaominina amin’ny tsy fitehirizana ireo entana mora andairan’afo mba hisorohana ny mety ho hain-trano.
FIPOAHANA SY FETIM-PIRENENA
Handray ny andraikiny amin’ireo mpanapoaka afomanga tsy nahazoana alalana sy tsipoapoaka etsy sy eroa ny mpitandro filaminana, amin’izao an-katoky ny fetim-pirenena izao. Tanjona ny hanavahana ny poa-basy sy ny kilalao.